MGBE NOVA CANA
1947 (May 2): Angela Volpini dị afọ isii natara Oriri Nsọ nke mbụ ya n'obodo Casanova Staffora, Lombardy, ,tali, na oke ugwu Apennine.
1947 (June4): Angela, mgbe ọ gbara afọ asaa na June 2, nwetara ọhụụ mbụ nke Virgin Mary n'otu ebe a na-akpọ Bocco na ugwu na-ele Casanova Staffora.
1947 (July 4): Oge nke abụọ pụtara na ọhụụ ahụ gosipụtara na ọ bụ Meri. Nke a guzobere usoro nke ngosi na nke anọ nke ọnwa maka afọ itoolu.
1947 (Ọktọba 4): A na-akọ akụkọ ihe mere eme nke anyanwụ, nke yiri ihe ngosi ndị ọzọ ọkachasị Fátima, n'oge ngosipụta ahụ.
1947 (Nọvemba ma ọ bụ Disemba): Diocese nke Tortona, ebe ọ hụrụla nnukwu igwe mmadụ gbakọrọ na Casanova Staffora, bidoro nyocha.
1948 (Eprel 18): Nnukwu ntuli aka Italiantali nke 1948 mere. Ndị Christian Socialists nwetere ikike megide njikọ aka ekpe nke ndị isi ọhaneze na ndị Kọmunist.
1950 (Nọvemba 4): A na-akọ akụkọ ihe mere eme nke anyanwụ, nke yiri ihe ngosi ndị ọzọ ọkachasị Fátima, n'oge ngosipụta ahụ.
1950: Owuwu nke cappellina (Bekee: “obere ụlọ ụka”) bidoro na saịtị nke pụtara; ugbu a awụnyere ihe oyiyi na 1960.
1952 (June 6): Ihe ngosi izizi nke mkpebi nke kọmịis diocesan nke nyocha amaara. A toro agwa Angela ma kwupụta na uche ya dị mma, mana Chọọchị were ọnọdụ na enweghị ihe akaebe ga-ekpe ikpe maka ọdịdị ya dị ka nke karịrị mmụọ.
1955 (November 4): Oge ikpeazụ a ghapụtara na usoro ihe omume mere, mana Virgin kwere nkwa na ya ga-alọghachi ọzọ.
1956 (June 4): Ngosiputa nke ikpeazu mere ka Nwa agbogho buru amuma banyere nwughari nke ime mo mgbe oge ufodu di n’etiti mba di iche. O kwuru na Chineke na-eme ebere ma na-agbaghara ndị mmadụ ntaramahụhụ.
1957 (August 15): Diocese nke Tortona kwetara na enwere ike wuo ụka na Bocco dị ka ụlọ nsọ Marian.
1958 (Eprel 9): Angela wegara Pope Pius XII faịlụ nke ozi ya na St Peter nke dị na Rome.
1958 (June 22): Nkume mbụ nke ụlọ ụka ọhụrụ ahụ bụ nnukwu onye ụkọchukwu Monsignor Ferreri, tinyere ọtụtụ ndị njem ala nsọ nọ.
1958: Mkpakọrịta Nova Cana tọrọ ntọala site na Angela mgbe ọ dị afọ iri na asatọ.
1959 (November 4): mgbịrịgba nke ụka ọhụrụ a gọziri site na Canon Caldi, onye nnọchiteanya nke Bishop Melchiori nke Tortona.
1962 (June 4): Monsignor Rossi, bụkwa onye nnọchi anya bishọp nke Tortona, mere emume Mass nke ejiri gọzie ma mepe ụlọ ụka ọhụrụ ahụ.
Ngosipụta nke Casanova Staffora mere na agha nke agha Italytali mgbe agha bisịrị, n’etiti ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ejighị n’aka. Na 1947, mgbe agha bisịrị Italytali nọ n'ọgba aghara nke amaghị ma gọọmentị ga-eme n'ọdịnihu ọ ga-abụ Christian Democrat, wee si otu a na-akwado Chọọchị, ma ọ bụ Socialist / Communist, na iyi egwu ụzọ ndụ Katọlik nke a ga-enwe aro na ọkara nke narị afọ nke iri abụọ na oge Agha Nzuzo. Ndị Christian Democrats meriri ntuli aka dị mkpa n'April 1948 wee nọrọ n'ọchịchị ruo ọtụtụ iri afọ (n'etiti ndị ọzọ, lee Ginsborg 1990).
Ndị kwenyere na Casanova Staffora kwenyere na ọnọdụ mba dị mkpa maka mbido ụlọ nsọ ahụ; afọ iri 1944-1954 hụrụ Marian apparition na Italy karịa n'oge ọ bụla ọzọ. Angela bu ụzọ kọọ mgbe ọ hụrụ Virgin Mary na June 4, 1947, ebe ọ gafere ụbọchị ọmụmụ ya nke asaa ụbọchị abụọ gara aga. Ozi mbu sitere na Virgin Mary bu: "Abiala m ịkụziri ụzọ obi ụtọ n'ụwa a… Bụrụ onye ọma, kpee ekpere na m ga-abụ nzọpụta nke obodo gị" (weebụsaịtị Angela Volpini na weebụsaịtị 2016). Edere akụkụ mbụ nke ozi a na bọọdụ na saịtị nke ngosipụta ahụ, ndị cappellina (obere ụlọ nwere ihe akpụrụ na akara akara). Nye Angela, ọhụụ mbụ a gosipụtara ihe ọ bụla ọ kwenyerela banyere Chineke, Meri, na ụmụ mmadụ:
Ọ bụ ebumnuche nke ndụ mmadụ, ọ bụ ohere mmadụ niile, ọ bụ ihe nyere mmadụ niile dị ndụ uru. Ọ bụ ọ joyụ nke Onye Okike. Site na oke iru m nwere ike ikwu na atụgharịrị m uche maka ụwa niile, site n'anya Madonna ahụrụ m mmadụ niile… Ahụrụ m akụkọ niile banyere ụmụ mmadụ (Angela Volpini's weebụsaịtị 2016).
N'oge ọhụụ mbụ a, Angela [Foto dị n'aka nri] bụ nwa agbọghọ na-arụ ọrụ ugbo, na-azụ ehi na ụmụaka ndị ọzọ na mpaghara ugwu. A maara dị ka Bocco, narị mita ole na ole n'èzí obodo. N'ihe dị ka elekere anọ nke ehihie ọ na-echeta ịnọ ọdụ n'elu ahịhịa na-etinye okooko osisi n'ime ụyọkọ. Ọ dị ya ka mmadụ ọ buliri ya elu, chee na ọ bụ nwanne nne ya, tụgharịrị ka ọ hụ nwanyị a na-amaghị ama nwere ihu mara mma. Angela bụ naanị onye ọhụụ, ebe ụmụaka ndị ọzọ anaghị ekerịta ahụmịhe a (otu njirimara nke njegharị ọhụụ na-adịte aka ma doo anya bụ onye Madonna na-ekwu okwu ya; ọtụtụ olu nwere ike imebi aha nke ikpe ahụ ). Angela mere ngwa ngwa hụ ọhụụ ya dị ka Virgin Mary, nke a gosipụtara na ngosipụta nke abụọ otu ọnwa mgbe e mesịrị na July 4, 1947, mgbe ọhụụ ahụ kwupụtara na ya bụ Meri. E mekwuru ka nke a doo anya na August 4, mgbe ọ kpọrọ onwe ya “Meri, Enyemaka nke Ndị Kraịst, Ebe Mgbaba nke Ndị Mmehie.” Ndị a bụ aha ndị a na-akpọ Meri.
N'oge na-adịghị anya ndị njem ala nsọ batara n'ọtụtụ puku ha na Casanova Staffora. Ka ọ na-erule n'oge mgbụsị akwụkwọ nke 1947, ọ bụ akụkọ banyere mba; akwụkwọ akụkọ dịka La Stampa na taa kpuchiri akụkọ ahụ. Ìgwè mmadụ ahụ sonyere na ihe ndị ahụ dị egwu: aha akwụkwọ Ferdinando Sudati (2004) na-akwalite ọdịdị, Nduru posarano m suoi piedi (“Ebe ụkwụ ya gara”), na-ezo aka n'eziokwu ahụ bụ na ndị njem ala nsọ kwuru na ha ahụla ụkwụ Meri a na-adịghị ahụ anya na okooko osisi ndị edobere iji sọpụrụ ya. Mmegharị ahụ́ nke Angela na ịmụmụ ọnụ ọchị ya mesiri ha obi ike na Meri nọ ya; o nyefere okooko osisi nye Virgin na ụmụaka ka ha susuo ma gọzie, o wee buru nwa ahụ a na-adịghị ahụ anya nke Kraịst na aka ya. Rinelọ arụsị ahụ lepụrụ anya na ịma mma nke ndagwurugwu Apennine dị n'okpuru, na-enye ebe a na-echefu echefu ebe ahụ. Na ngwụcha 1940s, ugwu jupụtara mmadụ n'ụzọ nkịtị. Dị ka ọtụtụ ndị ọhụhụ Katọlik, Angela dịka nwatakịrị hụrụ ọhụụ dọtara mmasị dị ukwuu. Ọtụtụ ndị ụkọchukwu bịakwara, ndị isi diocese na Tortona malitere nyocha. Angela kọwara etu ndị ụkọchukwu, ndị nta akụkọ, na ndị dọkịta si gbaa ya ajụjụ ọnụ: ọ na-echeta na akpọrọla ya n'ụlọ ya ihe dị ka ụbọchị iri anọ ma debe ya n'ime ụlọ na-enweghị windo. Ejiri nrụgide a hụ ma Angela ọ ga-ekweta na ọ gha ụgha ọhụụ, mana ọ bụghị.
A gosipụtara ọhụụ Angela na usoro, dị ka ọhụụ ndị ọzọ, na nke a na nke ọ bụla n'ọnwa nke ọnwa ruo na June 1956, na ụfọdụ nkwụsịtụ n'ime afọ. Usoro na-enyere aka ịmepụta ụkpụrụ nke njem uka. Ozi ndị ahụ abụghị ihe a maara na ọdịnala Marian: Virgin rịọrọ ekpere, nchegharị, ụlọ ekpere na, n'ikpeazụ, nnukwu ebe nsọ. Ihe ngosi Casanova Staffora putakwara ihe ngosi ndi a ma ama na Fátima na 1917, nke amara nke oma na Europe dum na ngwụcha 1940s, na atụmanya nke oke ọrụ ebube, ịdọ aka na ntị nke ntaramahụhụ Chukwu, na akụkọ na-akpali akpali nke mmegharị nke anyanwụ, maka nke mbụ oge na October 4, 1947 na mgbe e mesịrị na November 4, 1950, ụbọchị atọ mgbe nkọwa nke ozizi Assumption nke Meri site n'aka Pope Pius XII.
Ihe ngosi nke Angela kwubiri na June 4, 1956, ọ na-ekwu na ọ nwebeghị ahụmịhe ọzọ dị otú a. Ozi nke ọhụụ ikpeazụ a dị mkpa n'ịchọpụta ụzọ ndị ga-eme n'ọdịnihu. Dị ka Angela si kwuo, Mary kwuru, sị:
Oké ọrụ ebube amalitelarị, ọzọkwa, Chineke nke obi ebere ahapụbeghị ntaramahụhụ ya n'ụwa. Ọtụtụ mmadụ ga-abịaghachi na Nzukọ-nsọ ​​ma ụwa ga-emesịa nwee udo. Mana tupu nke a emee, ọtụtụ mba ga-ama jijiji ma dịkwa ọhụrụ. Na-echeta okwu ikpeazụ m mgbe nile: hụ Chineke n’anya n’eziokwu, hụ nne gị nke eluigwe n’anya, hụrịta ibe unu n’anya. Agaghị m alaghachi, mana m ga-enye ihe ịrịba ama na amara ndị e kwere na nkwa, ka ị wee mara na m ga-anọnyere gị mgbe niile (Sudati 2004: 174, nsụgharị m).
Ya mere, Angela dị afọ iri na isii, ozugbo ngosipụta ikpeazụ ahụ, kwupụtara na ọrụ ebube ga-abụ mmegharị nke mmụọ nke maliterela. Nke a, na mwepụ nke iyi egwu nke ntaramahụhụ Chineke, dị iche Casanova Staffora site na ngosipụta ndị ọzọ na ọkara nke abụọ nke narị afọ nke iri abụọ nke mesiri ọrụ ebube na ntaramahụhụ apocalyptic anya. Ozi Angela ga-abụ ihe ndabere na nchekwube banyere nduzi nke ọha mmadụ. Angela chetara na:
Mary gwara m na ọrụ ebube a ga-abụ mmụba nke akọ na uche ọha na eze na mmata. N’afọ 1958, m bidoro nzukọ a Nova Cana iji nyere usoro a aka. Nova Cana gbalịrị ime ka ndị mmadụ lebara ọbịbịa nke alaeze Chineke anya, dịka agbamakwụkwọ ahụ e mere na Kena bụ ngosipụta nke ịdị nsọ nke Jizọs. Ọ bụ ebe etiti maka mkparịta ụka. Achọpụtara m na ọ dị mkpa maka oghere nke ndị mmadụ nwere ike ịtụgharị uche na ọchịchọ ha maka mmezu wee mara na enwere ike ịghọta ya (Ajụjụ ọnụ, Ọktoba 28-31, 2015, kwukwara ihe a n'okpuru).
N'agbanyeghị nkwado ndị ụkọchukwu nyere Angela, ndị bishọp diọcese abụọ nke Tortona, Egisto Melchiori na Francesco Rossi, kwuputara na ha enweghị ike ịpụta ngosipụta ahụ, na 1952 na 1965 n'otu n'otu. Ha gosipụtara ekele ha nwere maka omume Angela na ọdịnala nke ozi ya, na enweghị ike iwepụ ikike nke sitere n'okike. Otú ọ dị, ha chere na ọ ga-abụrịrị na ọ bụ ihe kpatara ya bụ ahụmahụ nke mmekọrịta mbụ ya na ọbịbịa na akụkọ Fátima. Ka o sina dị, diocese ahụ nyere ikike maka iwu nke ụlọ arụsị ụka na Bocco, e debere nkume mbụ na 1958, ma onye nnọchi bishọp na-agọzi ụlọ ahụ na 1962. Mmekọrịta ya na Churchka anaghị abụkarị nke ọma, mana diocese na-aga n’ihu na-enye nkwado site n’ịhọpụta onye ụkọchukwu iji mee Mass na Bocco otu ugboro n’ọnwa. Ọzọkwa, Angela enweela ezigbo ọbụbụenyi na ọtụtụ ndị ụkọchukwu na ndị mọnk, ọkachasị ụkọchukwu na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị Don Gianni Baget Bozzo (1925-2009) na mọnk Frate Ave Maria (1900-1964) nke hermitage nke Sant 'Alberto di Butrio.
Ozi Angela si n'aka Mary nwere nchekwube banyere ikike mmadụ n'ụzọ na-atụ anya mmegharị Katọlik ọzọ, dị ka Ihe Ime Mmụọ na Mmadu zuru ezu, zuru ndu. Ha nwekwara myirịta ndị na-abụghị ndị Katọlik na Mgbanwe Okike Mmadụ na United States na-ebili na 1960s. Otú ọ dị, maka Angela, ọhụụ a adịlarị na ngosipụta mbụ na June 4, 1947, mgbe Mary kwuru na "Abịara m ịkụziri ụzọ nke obi ụtọ na onwa a." Angela kwuru, sị:
Mary bu akara ngosi nke akuko banyere mmadu. Ndi mmadu nile nwere ohere imezu na ntinye nke mpaghara nke Chineke, Meri bu onye emezuru nke a.
Ọ bụ ezie na Angela na-ezo aka na mkpa nnwere onwe mmadụ, ọ naghị etinye onwe ya na nkà mmụta okpukpe nnwere onwe kwa se, ma obu site na akwukwo ndi nwanyi. Ka o sina dị, ọ kwenyere na ịbụ nwanyị emeela ka o sikwuoro ike ịnụ olu ya na Chọọchị.
Angela na-ele Meri anya dị ka ụmụ mmadụ mezuru: ọ bụ mmadụ mbụ iji mezuo ma bụrụ onye nlereanya nye ndị ọzọ niile. Meri nwere mmekọrịta chiri anya nke mmekọrịta ya na Chineke, Angela (ọ maara na enwere ike ịkọwa ozi ya) na-eme ka o doo anya na Chineke na Meri dị iche iche ma ghara inwe mgbagwoju anya. Ebumnuche mmadụ ọ bụla bụ Meri kamakwa ka onye ọ bụla pụọ ​​iche. Iji kwuo Angela:
Imezu bu mmepe nke puru iche nke anyi, nke anyi jiri mee ka anyi na Chineke jikota. Echiche nke Chineke dabere na nke onwe; obu ya bu uzo izizi nke onwe. Mgbe mmadu mezuru, anyị nwere ike ịbanye na ngalaba nke Chineke. Enwere nhọrọ, nhọrọ ị hụrụ n'anya.
Ihe oru ngo Chineke bu ihe omuma ma Chineke ahoro Meri. Nke a bụ n'ihi na ọ bụ ya bụ mmadụ na-ekweta ma na-achọpụta ikike ya. O nyefere onwe ya na ọchịchọ nke ya ịhụ n'anya na ọdịghị ọdịbendị gbara ya gburugburu. Ọ chọpụtara na ihe nzuzo nke Chineke bụ na enwere ike ime nke a.
Angela kwukwara, sị:
Nke a bụ ọhụụ nke ikike mana ọ dabere na anyị. Ọrụ nke ịnata ozi bụ ọrụ dịịrị anyị. Ndị kwere ekwe na ọdịnala nke okpukpe niile họọrọ inyefe Chineke nke a. Meri tụkwasịrị onwe ya obi. Meri nwere onwe ya pụọ ​​na Chineke iji zute ya n'ịhụnanya. Nke a bụ oru ngo nke mmadụ niile: 1) bebụ onwe gị, nke bụ nzube nke okike, na 2) ịhụ n'anya, nke bụ ịghọta ọdịdị mmadụ. Ihe ndi ozo sochiri.
Shlọ arụsị na Bocco, Casanova Staffora, [Foto dị n'aka nri] bụ akụkụ nke diocese Roman Katọlik nke Tortona. Ya mere, emume okpukpe na-eso sacramenti nke Katọlik nke ndị ụkọchukwu diocese na-elekọta. Angela Volpini na eme ndi otu Nova Cana nọgide n'ime Chọọchị Katọlik.
Angela keere òkè na ozi nke mmeghari ohuru site na ịmalite otu mkpakọrịta ọhụrụ maka ekpere, Nova Cana, na 1958. Ndị otu achọrọ ka ọ bụrụ nwata, ụkpụrụ ya na-asọpụrụ na ịhụnanya maka mmadụ, yana ịdị n'otu nke echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndụ okpukpe. N'adịghị ka ndị ọzọ narị afọ nke 20 mmeghari Katọlik dị ka Opus Dei, na Nova Cana mmegharị ahụ na-anọdụ ala n'aka ekpe nke ụdị ndọrọ ndọrọ ọchịchị karịa aka nri. Nke a gbara akaebe site na njikọ ya na ụka Latin America, yana kọntaktị ya na ndị bishọp nwere asambodo nnwere onwe nnwere onwe dịka Helder Camara na Oscar Romero. Angela kwuru na ndị bishọp Latin America kpọrọ ya ka ọ kwurịta isiokwu nke Kansụl Vatican nke Abụọ nke ọhụụ ya banyere ikike mmadụ kwekọrọ. Na 1960s na 1970s, Nova Cana dọtara ụmụ akwụkwọ na ndị ọrụ aka ekpe, ndị otu Churchka boro ya ebubo ịbụ ndị ọchịchị Kọmunist. Ọ bụ ezie na Angela na-anabata nke ahụ Nova Cana ya na ọrụ enyemaka ya metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ na-ekwukwa na ọ dịghị mgbe ọ bụla ọchịchị Kọmunist (mmekọrịta ọha na eze na ọchịchị Kọmunist nwere ike ịkọwapụta nke ọma na akụkọ ntolite ọchịchị Italiantali) Mgbe nsogbu na withka mere nke a kpatara, e mere ka Angela na parish dị n’afọ 1980 wee kwadobe onwe ya dịka onye nkuzi Katọlik a na-ekwu okwu na ọkà okwu; edere otutu akwukwo na otutu ederede banyere ya ma ya aputala otutu oge na onyonyo. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ndị bishọp nke Tortona gara n'ụlọ arụsị na Bocco na ọ na-aga n'ihu na-adọta ndị njem ala.
Angela na-akọwa Nova Cana n'ụzọ ndị a:
Nova Cana nyere mkpali maka ọmụmụ nke atumatu nke ebumnuche ya bụ iji uru isiokwu ndị akụ na ụba na-arụ ọrụ na mpaghara mpaghara n'okpuru ọnọdụ dị ogologo oge. N'ihi nkwanye ùgwù onwe onye nke Nova Cana nwere ike ịgbanye na ndị isiokwu ahụ, ndị ọrụ ugbo nọ naanị ha ghọrọ ndị ọchụnta ego nke oge a. Dịka ọmụmaatụ, e kere anụ ụlọ na ọrụ ugbo (Angela Volpini weebụsaịtị 2016).
Nova Cana na-enwe nzukọ na-aga nke ọma, nzukọ ọmụmụ ihe, na ọmụmụ ihe, ma nyeere Angela aka ibipụta ọtụtụ akwụkwọ, yana nkesa na puku kwuru puku. Di Angela, Giovanni Prestini, onye ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze, enyela aka na mwube ndị ọrụ mmekọrịta na mpaghara ọrụ ugbo gbara Casanova Staffora gburugburu. Nova Cana na-arụ ọrụ iji kwalite ùgwù onwe onye na obodo ndị dara ogbenye ma si otú a na-enyere ndị mmadụ aka ịghọta ikike ha maka mmepe akụ na ụba, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Nova Cana A malitela ọrụ na Peru, Brazil, Turkey, na South Africa.
Nova Cana adịwo anya site na Chọọchị Katọlik gọọmentị, n'agbanyeghị nkwado nke ọtụtụ ndị ụkọchukwu na nleta nke ndị bishọp n'ụlọ arụsị na Bocco. Na mbido, mgbe Angela bụ nwatakịrị, a kwenyeghị Chọọchị iji gosipụta ọdịdị ahụ, mkpebi nke ka na-adịgide. Ka oge na-aga, nkọwa okenye nke Angela banyere ọhụụ ya dị iche n'akụkụ ụfọdụ na nkuzi Katọlik dị ka Vatican guzobere. Agbanyeghị, nke a emeghị Nova Cana ịrọ òtù, ebe ọ bụ na ndị obodo emebeghị ezumike zuru oke na Churchka. Ozizi Angela niile gosipụtara ọdịnala Katọlik ebe amụrụ ya.
Otu ọdịiche dị n'etiti ọhụụ Angela na nkuzi nkuzi nke ụka bụ n'eziokwu na ọ kwenyere na anyị niile dị ọcha. Nke a adabaghị na nkuzi nke Churchka, nke Meri bụ sọọsọ ọnọdụ a tụrụghị ime ya. Angela gosiri ọdịiche dị n'ọhụụ nke ya na nkuzi ụka site n'ikwu na Churchka na-ekwusi ike nke Chukwu na mgbapụta Jizọs, ebe ọ na-etinye oke arọ na mmezu mmadụ na nkwenye dịka nkwenye na ntọhapụ nke mmadụ. Nye ya, Jizọs bụ onye na-ekpughe ikike anyị karịa onye mgbapụta; ọ na-emegide echiche na-enweghị isi banyere itinye aka na nzọpụta. Ọ na-ekwu, sị:
Nke a abụrụla ọrụ m, iji nyere ndị mmadụ aka ka ha nwekwuo ike maka onwe ha na ụwa, ma bie ọchịchọ ha bụ mmalite. Ihe oru nke Nova Cana bu ihe omuma atu nke ikike a. Chi dị n'ime mmadụ nwere ikike na nhọrọ. Mmadu aghaghi ihu ikike a na mmadu. Ozi a kariri ihe banyere mmadu karia banyere Chineke. Ikwesi ntukwasi obi nye onwe gi bu isi ihe nke mmekorita nke Chineke. Na-enweghị nke a, mmadụ enweghị ike ikwesị ntụkwasị obi nye ndị ọzọ. Chọọchị anaghị emesi ozi a ike; kama nke ahụ, dịka Churchka na-akuzi na mmadụ bụ onye mmehie ma chọọ onye nzọpụta, mana n'ezie inwe nzọpụta dị n'ime. Site n'okwu, omume ya, ndụ ya, ọnwụ ya na mbilite n'ọnwụ ya, Jizọs gosiri anyị nnwere onwe inwere onwe anyị. Nzọpụta bụ ihe anyị rụzuru na uru anyị bara.
Angela na-ahụ echiche ndị a dị ka ihe dị mkpa n'ọhụụ nke Second Vatican Council. Dị ka ndị ọzọ gbasoro nkọwa dị egwu nke Kansụl ahụ, dịka nnwere onwe Katọlik na ndị ọkà mmụta okpukpe ụmụ nwanyị na ụfọdụ ndị ọkà mmụta okpukpe na-aga n'ihu, Angela na-ele onwe ya anya dị ka onye Katọlik mana ọ bụghị onye ga-anabata echiche nke Magisterium n'enweghị ajụjụ. Ọ na-ekwu, sị: “Unitydị n'otu dị ezigbo mkpa ma ọ dịghị emebi akọ na uche. Dị n'otu adịghị ekwekọrịta, kama ịdị n'otu dịgasị iche iche. "
Esemokwu dị n'etiti ndị isi ụka nke Chọọchị na ndị ọhụụ bụ ndị na-abụkarị ụmụ nwanyị dị ka isi mmalite nke nkuzi nwere ike karịa karịa ka a na-eche na ọ bụ ikpe ahụ (lee Maunder 2016). Echiche bụ na ndị ọhụụ nanị na-ekwughachi nkuzi ụka ma si otu a dịrị naanị iji mee ka ọnọdụ Vatican sie ike adịghị mma. Echiche a nwere ike nweta ma eleghị anya site n'aka Bernadette Soubirous, onye ama ama na Churchka dịka onye ọhụụ ọhụụ nke kwuru na Mary kpọrọ onwe ya "Echiche nke Immaculate" nanị afọ anọ ka Pius IX kwupụtara nke a dị ka nkwenkwe Ọ bụ onye ọhụụ kachasị mara amara, ikekwe, mana ọ bụghị ikpe nkịtị.
Ọhụụ nke Chọọchị kwadoro, ọ bụ ezie na ndị na-efe ofufe na-achọsi ike, ọ bụ ihe ọzọ karịa iwu. Na narị afọ nke iri abụọ Europe, ọ bụ naanị ngosipụta anọ (na Fátima [Portugal, ọhụụ na 1917], Beauraing, Banneux [ma Belgium, 1932-1933], na Amsterdam [Netherlands, 1945-1949]) ka bishọp diọcese nyere nkwado zuru oke. . Ndị ọzọ nwetara ọnọdụ nke ụlọ arụsị diocesan ndị ọrụ mana na-enweghị ọhụụ nke ọhụụ ahụ: ihe atụ gụnyere ụlọ arụsị nke German Heede (1937-1940), Marienfried (1946) na Heroldsbach (1949-1952). Ọtụtụ ndị ọzọ nwetara nkwekọrịta nke theka nabatara ịdị adị nke ụlọ arụsị ahụ ma nye nkwado ụfọdụ, dị ka ngọzi nke ụlọ arụsị na inye ndị ụkọchukwu ka ha mee Mass. Nke a bụ ihe mere na Casanova Staffora. Ihe omuma ama ndi ozo nke ikwenye dika San Sebastian de Garabandal (Spain, 1961-1965), San Damiano (Italy, 1964-1981) na Medjugorje (Bosnia-Herceovina, 1981-date).
N'ikpeazụ, mgbe Angela Volpini nwere ọhụụ ọhụụ nke ọtụtụ puku ndị njem ala na-ele anya na 1940s na 1950s, nke a bụ ihe okike zuru oke ma dị mma n'ihe metụtara oge ahụ. Nghọta nke nwatakịrị ahụ abụrụla nke a ghọtara na Katọlik dị ka onye nwere ihu ọma pụrụ iche nke Chineke n'ihi nke aka ha dị ọcha, echiche nke Kadịnal Ratzinger, onye mechara mechara Pope Benedict XVI, kwuchara Ozi nke Fatima (Bertone na Ratzinger 2000). Agbanyeghị, akwụkwọ m adịbeghị anya, Nwanyị Nwanyị nke Mba: Nkọwa nke Meri na 20th Century Catholic Europe jụrụ ma a ga-ewere itinye ndị na-ahụ ihe ụmụaka ka ha mee ka ọha na eze lebara anya dị ka ihe a ga-anabata dị ka ogologo oge maka ịtụle ọdịmma ụmụaka. Gilles Bouhours nke Espis na France (ebe ọhụụ mere otu ìgwè ụmụaka n'etiti 1946 na 1950) dị naanị afọ abụọ mgbe a matara ya dị ka onye ọhụụ. Mgbe ahụ, n'ụzọ na-enweghị atụ, ndị ọhụụ kachasị ama mgbe mbido 1980 (mgbe ụmụaka Medjugorje malitere ịmalite ọhụụ) abụwo ndị toro eto. Ntughari nke ofufe Katọlik n'ihi ngosipụta nke ụmụ ime obodo ka ịzụrụ anụmanụ bụ [ụkpụrụ dị n'aka nri] abụrụla ọkọlọtọ ụkpụrụ na Europe gafee narị afọ, mana ihe ọhụụ a na-apụ n'anya ugbu a.
Foto # 1: Foto nke Angela Volpini na-efe ofufe dị ka nwatakịrị.
Image # 2: Foto nke ụka dị na Bocco.
Image # 3: Foto nke Angela Volpini na-azụ ehi dịka nwa agbọghọ.
* Ihe e dere na ederede si n'aka Angela Volpini nke a na-edeghị aha ya sitere na ajụjụ ọnụ n'oge m na-arụ ọrụ na Casanova Staffora, Ọktọba 28 - 31 2015.
Ebe nrụọrụ weebụ Angela Volpini. 2016. Nweta site na http://www.angelavolpini.it na 5 November 2016. Ntughari site na Laura Casimo.
Bertone, Tarcisio na Ratzinger, Joseph. 2000. Ozi nke Fatima. Vatican City: Ọgbakọ maka Ozizi Okwukwe. Nweta site na http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_en.html na 5 November 2016.
Ginsborg, Paul. 1990. A History of Contemporary Italy: Society na ndọrọ ndọrọ ọchịchị 1943–1988. London: Penguuin.
Chris, Chris. 2016. Nne anyi di iche iche nke mba di iche iche: ihe omuma nke Meri na 20th Century Catholic Europe. Oxford na New York: Mahadum Oxford University.
Weebụsaịtị Nova Cana. 2016. Nweta site na http://www.novacana.it/index.htm na 5 November 2016.
Na mberede, Ferdinando. 2004. Dove Posarono na suoi Piedi: Le Apparizioni Mariane di Casanove Staffora (1947 - 1956). Nke atọ. Barzago: Marna Spiritualità.
Volpini, Angela. 2003. La Madonna Accanto na Noi. Trento: Reverdito Edizioni.
Onyeisi, Sarah J., ed. 2007. Mary: Ihe zuru ezu. London na New York: Na-aga n'ihu.
Graef, Hilda na Thompson, Thomas A. 2009. Mary: A History of Doctrine and Dev nsọ, Agba Ọhụrụ. Notre Dame, IN: Ave Maria.
Onyekachi, Karl. 1974. Meri, Nne nke Onye-nwe-anyị. Wheathampstead: Anthony Clarke.
Ekele dịrị Angela Volpini maka ikwere ka onye edemede ahụ gbara ya ajụjụ ọnụ na Casanova Staffora na Ọktoba 2015, na Maria Grazia Prestini maka ịkọwa na ajụjụ ọnụ ndị a, yana Nova Cana obodo maka inye nnabata mara mma. Ana m ekelekwa Laura Casimo maka ịsụgharị amaokwu sitere na weebụsaịtị Angela Volpini.
Bọchị Mgbasa Ozi: